Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း)
Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ဝမ်းကိုက်ရောဂါဆိုတာ Salmonella နှင့် Shigella ကဲ့သို့ ဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်သော အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းထဲမှာပါလာတဲ့ ဘတ်တီးရီးယားပိုးတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါပိုးတွေဟာ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
၎င်းဘတ်တီးရီးယား ရောဂါပိုးဟာ မသန့်ရှင်းသော အစားအသောက်တွေနဲ့ မသန့်ရှင်းသောရေကို သောက်သုံးမိခြင်း၊ မသန့်ရှင်းသော အစားအစာများ စားသုံးမိခြင်း၊ မသန့်ရှင်းသော ရေတွင်ရေကူးမိခြင်း စတာတွေကတစ်ဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အသက် ၂နှစ်မှ ၄နှစ်ကြား ကလေးများတွင် ပို၍ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီထက် နွေရာသီတွင် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
သင်ဟာ ၎င်းဘတ်တီးရီးယား ပိုးများနဲ့ထိတွေ့ပြီး ၁ရက် သို့မဟုတ် ၂ရက်အကြာတွင် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၏ အဖြစ်များသော ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည့် ဝမ်းသွားသောအခါ များသောအားဖြင့် သွေးပါလေ့ရှိခြင်း၊ ဖျားခြင်းနှင့် အစာအိမ်အောင့်ခြင်း စတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းကိုက်ရောဂါဟာ များသောအားဖြင့် ၅ရက်ကနေ ၇ရက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ အချို့လူများ အထူးသဖြင့် ကလေးငယ်များနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက်ခြင်းဟာ ပိုဆိုးလာနိုင်ပြီး ဆေးရုံတက်ရတဲ့ထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့လူများမှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းရှိသော်လည်း လက္ခဏာ မပြသောသူများ ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဒီအခြေအနေမှာ အခြားလူများကိုတော့ ဘတ်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။
သွေးပါသော ဝမ်းများလျှောခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျပြီး ရေဓါတ်ချို့တဲ့ သည်အထိ ဝမ်းလျှောခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်ပါက သင့်ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါတယ်။ သင် သိုမဟုတ် သင့်ကလေးမှာ ဝမ်းလျှောပြီး အဖျားမှာ ၃၈°C နှင့်အထက် ဖြစ်လာလျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဝမ်းကိုက်ရောဂါဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ဘတ်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းဟာ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပိုးဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကတော့ Shigella, Campylobacter, E. coli, နဲ့ Salmonella မျိုးစိတ် ဘတ်တီးရီးယားပိုး အမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဟာ သင့်ရဲ့ဝမ်းမှာ ဘတ်တီးရီးယားပိုး တွေရှိနေတဲ့အခါ သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ပိုးများနဲ့ ညစ်ပေနေသော လက်ချောင်းများနှင့် အစာစားမိတဲ့အခါ မှာလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ လက်ဆေးသော အလေ့အထနည်းသော သူများနှင့် မသန့်ရှင်းသော အစား အစာစားမိသောသူများမှာ ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
ဝမ်းကိုက်ရောဂါဟာ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းများ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများ၊ ဒုက္ခသည် စခန်းများနှင့် လူနေထူထပ်ပြီး သန့်ရှင်းမှု နည်းပါးသောနေရာ များတွင်အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။
Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အသက် ၂နှစ်နှင့် ၄နှစ်အရွယ်ကြားရှိ လမ်းလျှောက်ခါစ ကလေးငယ်များတွင် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ အဖြစ်များလေ့ရှိပါတယ်။
အသင်းအဖွဲ့လိုက် အိမ်တစ်ခုတည်းတွင်နေထိုင်ရခြင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုလိုက် လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ရန် အတူတကွ နေထိုင်ခြင်း စတဲ့အခြေအနေတွေမှာ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးဟာ ဘတ်တီးရီးယားပိုးတွေကို အချင်းချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ထိတွေ့ခြင်းက တစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်ကြပါတယ်။
ကလေးပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး စင်တာများ၊ အများပြည်သူသုံး ရေကူးကန်များ၊ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာများ၊ အကျဉ်းထောင်များ နှင့်စစ်တန်းလျားများ စတဲ့နေရာတွေမှာ Shigella ပိုးကြောင့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။
သန့်ရှင်းမှု မရှိသောနေရာများတွင် နေထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ခရီးသွားခြင်းကလည်း ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူများ သို့မဟုတ် ၎င်းနိုင်ငံများသို့ ခရီးသွားသူများဟာ Shigella ပိုးရောဂါကူးစက် ခံရခြင်း ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်တက်ကြွသော မိန်းမလျှာများတွင်လည်း တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ် တစ်ဆင့်ခံ ပါးစပ်နှင့် စအိုထိတွေ့မှုကြောင့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါတယ်။
Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အမျိုးမျိုးသော ရောဂါတွေဟာ ဖျားခြင်းနှင့် သွေးဝမ်းများသွားခြင်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဝမ်းကိုက်ရောဂါကို အဖြေရှာအတည်ပြုရန်အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို စမ်းသပ်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းများကိုလည်း မေးမြန်းဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လတ်တလောစားသောက်ခဲ့သော အစားအစာများ၊ သင့်အလုပ်နေရာ၊ အိမ်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်များ အကြောင်းကိုလည်း မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ဝမ်းကို ပိုးမွေးပြီး ရောဂါရှိမရှိကို အဖြေရှာအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ သင့်လက္ခဏာတွေဟာ အရမ်းဆိုးဝါးမယ် သို့မဟုတ် တစ်ခြားအကြောင်းအရင်းကြောင့် ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးချင်တယ် ဆိုလျှင် သွေးစစ်ခြင်းများ ကိုလည်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Dysentery (ဝမ်းကိုက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
တကယ်လို့ သင်ဟာ ကျန်းမာရေးကောင်းသူဖြစ်ပြီး ဝမ်းကိုက်ရောဂါပိုးဟာလည်း သိပ်မဆိုးဘူးဆိုရင် ဝမ်းလျှောခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသော အရည်များကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို အောက်ပါကုသနည်းများဖြင့်လည်း ကုသနိုင်ပါတယ်။
မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် HIVရောဂါ ပိုးရှိသူများ၊ အခြားသူများကို ရောဂါပိုးကူးစက်နိုင်ချေ မြင့်မားသူများ စသောသူတွေမှာ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများ သောက်ရန် လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အရည်နှင့် ဓါတ်ဆား ပြန်ဖြည့်ပေးခြင်း
ယေဘုယျအားဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းသော အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေဟာ ရေသောက်ခြင်းအားဖြင့် ဝမ်းလျှောတဲ့အခါ ဆုံးရှုံးသွားသော ရေဓါတ်တွေကိုပြန်ဖြည့်ပေး နိုင်ပါတယ်။ ကလေးများအတွက်ကတော့ Pedialyte ကဲ့သို့ ရေဓါတ်အားဖြည့်အရည်ကို တိုက်ပေးခြင်းဟာ ကလေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။
ရေဓါတ်အလွန်အကျွံ ချို့တဲ့နေသော ကလေးငယ်များနှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဟာ ဆေးရုံရဲ့ အရေးပေါ် ခန်းမှာ ကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ ပါးစပ်ကတဆင့် သောက်ခြင်းထက်စာလျှင် သွေးပြန်ကြောမှ တစ်ဆင့် အရည်နှင့်ဆားဓါတ်များကို အမြန် သွင်းပေးနိုင်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။
ပါးစပ်မှ သောက်ခြင်းထက်စာလျှင် သွေးပြန်ကြောမှ ရေဓါတ်ပြန်ဖြည့်ပေးခြင်းဟာ ခန္ဓါကိုယ်တွက် လိုအပ်သော ရေနှင့် မရှိမဖြစ် အာဟာရဓါတ်တွေကို အလျင်အမြန် ရရှိစေပါတယ်။
Dysentery: Causes, Symptoms and Treatments. http://www.medicalnewstoday.com/articles/171193.php. Accessed
Shigellosis. http://www.emedicinehealth.com/shigellosis-health/article_em.html. Accessed June 12, 2016.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print version. Page 143.
Shigellosis. http://www.emedicinehealth.com/shigellosis-health/article_em.html. Accessed June 12, 2016.